Igwe eji Hifu, igwe mgbochi ịka nká, igwe Laser mara mma - Sincoheren
Guzosie ike na 1999, Beijing Sincoheren S&T Development co., Ltd bụ otu n'ime ndị na-eduga n'ichepụta nke ọkachamara elu mma equipments na ọgwụ ngwaọrụ ...
The àgwà bụ mkpụrụ obi nke ihe enterprise.Established na 1999, Beijing Sincoheren S&T Development co., Ltd. bụ otu n'ime ndị na-eduga rụpụta nke ọkachamara elu mma equipments na ọgwụ ngwaọrụ. A na-ere ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ebe na ịchọ mma, aesthetics na dermatology ubi. Mmepụta ahụ dị n'okpuru ISO 13485 ogo usoro yana dakọtara na asambodo CE.
Igwe eji emeghari akpụkpọ anụ IPL SHR
Nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ nke IPL-SHR bụ mmepe nke ọgbọ nke atọ nke usoro ọgwụgwọ ọkụ pulse nwere ọgụgụ isi, na-eji teknụzụ OPT zuru oke. Ọtụtụ ọgwụgwọ dị iche iche jikọtara ọnụ yana ụdị dị iche iche iji gboo mkpa ndị ahịa.
Igwe Laser Q-Switched Nd Yag
Q-Switched Nd:YAG nwere ike kacha elu yana obosara usu ọkwa nanoseconds. Melanin na melanophore na sel cuticle kpụrụ nwere obere oge ezumike dị ọkụ. Ọ nwere ike mee ka obere granules na-etinye ume ngwa ngwa (pigmenti tattoo na melanin) na-agbawa na-emerụghị anụ ahụ nkịtị gburugburu. A ga-ewepụ granules pigmenti agbawara agbawa n'ahụ site n'usoro ọbara.
808nm 755nm 4064nm Wavelengths Diode Laser Sistemụ iwepụ ntutu
Laser Razorlase diode na-ejikọta ogologo wavelength atọ nke 755nm 808nm 1064nm, nke nwere ike iru na ntutu isi. Melanin dị na follicle ntutu ga-ahọrọ na kpamkpam na-amịkọrọ ike laser wee kpoo ọkụ. N'ikpeazụ, cell stem follicle ntutu ga-emebi.
Biko hapụ anyị ka anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.